Horonantsary fanabeazana momba ny fanafoanana ny fitaovam-piadiana nokleary vaovao ho an'ny ankizy mianatra - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Aogositra 7, 2021 fandaharam-pianarana, Mifantoka ny tanora 0
Ireto horonan-tsary manaraka ireto dia novolavolain'i Feo ho an'ny tontolo tsy misy nokleary, fandraisana andraikitra avy amin'ny United Religions Initiative. Mpiara-miasa amin'ny feo sy URI miaraka amin'ny Sehatra UNFOLD ZERO, izay manabe sy mampiditra ny olona amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fizotran'ny UN mba hahatratrarana tontolo tsy misy fitaovam-piadiana nokleary.
# fitaovam-piadiana nokleary
UNESCO dia mitady mpiandraikitra tetik'asa ambony (miralenta sy fanabeazana)
Ny fampielezan-kevitra manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana "vaovao": mikatsaka fanabeazana an-tsitrapo, maharitra sy maharitra ho an'ny fandriampahalemana
Novambra 3, 2015 Toetoetra 2
Tamin'ny Mey 1999 ny Global Campaign for Peace Education (GCPE) dia natomboka tamin'ny fihaonambe Hague Appeal for Peace. Ny Konferansa Hague no fihaonambe fandriampahalemana iraisam-pirenena lehibe indrindra teo amin'ny tantara, [tohizo ny famakiana…]
Tsy misy fitsapana nokleary: tsy izao, tsy mbola nisy !! (sonia ny fanangonan-tsonia)
Jolay 8, 2020 Fanairana 0
Mpianatra amin'ny fandinihana fandriam-pahalemana iraisam-pirenena ao amin'ny Oniversiten'i Soka dia mitaky ny fanjakana nasionaly hampitsahatra ny fanandramana nokleary ary manentana ny mpianatra manerantany hiara-hanoherana ny fitsapana nokleary ary hanohana ny fankatoavana ny "Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary" avy amin'ny fireneny avy. [tohizo ny famakiana…]
Fiofanana / atrikasa
Fianarana an-tserasera maimaim-poana - Miaina ao amoron'ny Nuclear: Omaly sy anio
Oktobra 28, 2016 Fiofanana / atrikasa 0
Ity fampianarana an-tserasera maimaimpoana ity dia natolotry ny Oniversiten'i Stanford miaraka amin'ny The William J Perry Project, fandraisana andraikitra noforonin'ny sekreteran'ny fiarovana teo aloha hiasa amin'ny tontolo izay tsy ampiasana ny fitaovam-piadiana niokleary intsony. Ny tanjona lehibe amin'ity taranja ity dia ny hampitandrina anao ny amin'ireo loza atrehinao ary hanome anao fahitana ny zavatra azo atao mba hisorohana ireo loza ireo. Ny fampianarana dia tsy mitovy amin'ny maro hafa amin'ny fomba ifotony: ny tanjonay dia tsy ny hanome fotsiny ny zava-misy ho an'ny fianaranao, fa ny hanome aingam-panahy anao handray andraikitra. [tohizo ny famakiana…]